(Dhageyso)-Beesha Tanade Daarood oo ku dhaaqaday in ay ka Tashaneyso Masiirkeeda Siyaasadeed. | jariibannews.com
Aug 15, 2017 - Aragtiyood
Mudo sadax bilood ah oo shir Magaaladda Garowe uga soconayay Odayaal Waxgarad Siyaasiyiin Duqey dhaqan ka soo jeeda beesha Tanade Daarood oo ka Mid ah beelaha Degaanadda Puntland ayaa shirkaasi la soo gaba gabeeyay.
Shirkan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo dhowr oo ku saabsan sidii ay beeshan ka yeeli lahayd xaalada Siyaasadeed ee ka Jirta Puntland ka dib markii ay heli waayeen codsi ku aadan in xubno loogu darro kuraasta golaha wakiiladda ee Puntland.
Mudadii uu shirkan soconayay oo soo maray marxalado kale duwan ayaa dhanaca kale waxaa shirarkii ay beeshan ku yeelaneysay Garowe ka qeybgalayay isamo ka mid ah Putland kuwaasi oo dadaal dheer ku bixinayay sidii ay dhiira gelin lahaayeen codsida Odayaasha ee kordhinta tirada xubnaha Golaha Wakiiladda.
Qodobada ugu waa weyn ee shirkan laga soo saaray ayaa waxaa ka mid ahaa in beesha ay ka tashan doonto aayaheeda mustaqbalka shir weyna ay isgu imaan doonaan Magaalada Gaalkacyo.
“Shirar badan oo ay la yeelatay beeshu madaxda Maamulka, Isimada, Waxgaradka iyo Siyaasiyiinta beelaha ku bahoobay Puntland, waxaa beeshu xaqiiqsatay; in dulmiga awood qeybsiga Puntland uu yahay mid qoto dheer, kuna saleysan hab qabaliya; in xallintii tabashada beesha Tanade iyo go’aankii Isimada Puntland ay hortaagan yihiin dhammaan siyaasiyiinta beesha Majeerteen.” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qoraalka ee soo gaaray